Movie – Sunthit Myanmar
ဆရာတင့်တယ်ရဲ့ ကမ္မဖလ ၀တ္ထု ကို ဒါရိုက်တာပန်းချီစိုးမိုးက ပုံဖေါ်ရိုက်ကူးတဲ့ ကမ္မဖလ ရုပ်ရှင်ကားသစ် စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကို ၃၀.၁၂.၂၀၁၉ နေ့က သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံကြီးမှာ တခန်းတနား ကျင်းပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ ဒါရိုက် တာ ပန်းချီစိုးမိုးအပါအ၀င် ရုပ်ရှင်၊စာပေနဲ့ ဂီတနယ်ပယ်က အနုပညာရှင်များနဲ့ နီးစပ်ခင်မင်ရာမိတ်ဆွေများ ရုံပြည့်ရုံလျှံတက်ရောက်အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကားကြီးကို ယခုလ ၂ ရက်နေ့ကစပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရုပ်ရှင်ရုံအတော်များများမှာ အားပေးကြည့် ရှုနိုင်ကြသလို ကျန်တဲ့ နိုင်ငံအ၀န်းက ရုပ်ရှင်ရုံကြီးတွေ မှာလည်းတစ်ပြိုင်တည်း အားပေးကြည့်ရှုနိုင်ကြ ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ကမ္မဖလ ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာပန်းချီစိုးမိုးက ဦးဆောင်ကာ သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီ ပြေတီဦး၊ အကယ်ဒမီ မင်းမော်ကွန်း၊အကယ်ဒမီ စိုးပြည့်သဇင်၊အကယ်ဒမီ အေးမြတ်သူနဲ့ မိုးဟေကို အပါအ၀င် သရုပ်ဆောင် ပေါင်းများစွာတို့က ပါ၀င်အားဖြည့်ထားကြပါတယ်။ ခေတ်ဟောင်းကာလတစ်ခုက ရင်နာဖွယ်မိသားစုတစ်ခုရဲ့… Continue reading ဆရာတင့်တယ်ရဲ့ ကမ္မဖလ ၀တ္ထု ကို ဒါရိုက်တာပန်းချီစိုးမိုးက ပုံဖေါ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကမ္မဖလ ရုပ်ရှင်ကား မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပ
Categorized as Entertainment, Movie
မကြာသေးမီက ထွက်ရှိခဲ့ပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်ကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ Marvel ရဲ့ End Game ဟာ ယခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဒုတိယနေရာကိုရရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမနေရာကတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Avatar ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Avatar နဲ့ End Game ဟာ $2billions လောက်ပဲကွာတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက် End Game ဟာ ပထမနေရာကိုရောက်သွားမလားဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။ အဲလိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Marvel Studios ရဲ့ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းဟာ ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကို ယခုအချိန်မှာ လူတိုင်းက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ Disney က နောက်လာမည့် ၃နှစ် အတွင်းမှာ ပြသသွားမယ့် Marvel ရဲ့ Phase4မှာ ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကား ၈… Continue reading Disney က Marvel Studios ရဲ့ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းအသစ်များကို ချပြ
မကြာမီ ပြသတော့မယ့် Black Panther ဆိုတာ ဘာလဲ?
Black Panther ရုပ်ရှင်ဟာနိင်ငံတစ်ကာမှာ အောင်မြင်မှုရနေတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Marvel Studio ကရိုက်ကူးပြီး Black Panther ဇာတ်ကောင်ကို Captain America: Civil War မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Wakanda လို့အမည်ရတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ဘုရင်အဆက်ဆက်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့ Vibranium သတ္တူတစ်မျိုးအကြောင်းကို အခြေခံရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤဝတ္ထုကို Stan Lee နဲ့ (Jack Kirby) တို့ကရေးသားခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင်လူကြိုက်များသော comic တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ Black Panther ရုပ်ရှင်ကိုနိင်ငံတကာတွင်ပြသရန် ငါးရက်သာလိုပြီး မြန်မာပြည်မှာတော့ ဘယ်နေ့ ပြသမည်ကိုသေချာမသိသေးပါ။ ရုံးပိတ်ရက်၊ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ မိသားစုအလိုက်သွားကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Black Panther အကြောင်းကိုတော့ အောက်က link လေးကိုနှိပ်ပြီး အသေးစိတ် ဖတ်ရှုလေ့လာနိင်ပါတယ်။… Continue reading မကြာမီ ပြသတော့မယ့် Black Panther ဆိုတာ ဘာလဲ?
Categorized as Entertainment, Movie, News Tagged မၾကာမီ ျပသေတာ့မယ့္ Black Panther ဆိုတာ ဘာလဲ?
Game of Thrones’ ဇာတ္လမ္းတြဲ မွ Jon Snow သင္ခန္းစာမ်ား
Game of Thrones’ Jon Snow ဆိုရင္ ဇာတ္လမ္းတြဲထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ နာမည္ၾကီးဇာတ္ေကာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဥာဏ္ေကာင္း၊ဆြဲေဆာင္မႈရွိျပီး တိုက္ခိုက္နိုင္စြမ္းအျပည့္အဝနဲ႔ပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အရာေတြက သင့္လက္ေတြ႔ဘဝမွာပါ သံုးလို႔ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြပါပါတယ္။ ကဲဘယ္လိုသင္ခန္းစာတြင္ ရမလဲၾကည့္လုိက္ရေအာင္။ သူငယ္ခ်င္းမရွိတဲ့ လူမ်ားနွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ပါ။ ဒီကားထဲမွာ Jon ဟာ Samwell နဲ႔မိတ္ဖြဲ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက အစပိုင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလူနဲ႔ မိတ္ဖြဲ႔ရသလဲလို႔ ထင္ႏိုင္ေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အမွန္ကန္ဆံုး အလုပ္ပါပဲ။ သူ႔မွာတျခား သူငယ္ခ်င္းမရွိတဲ့အတြက္ သူ႔သစၥာတရားကေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔မွ မယွဥ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ေက်ာကို ဓါးနဲ႔မထိုးခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ Jon အတြက္ အားသာခ်က္တစ္ခုလိုျဖစ္လာျပီး တကယ္လုိအပ္တဲ့ ရဲေဘာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရလာသလိုပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ သင့္ဘဝအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္လူမ်ိဳးကို… Continue reading Game of Thrones’ ဇာတ္လမ္းတြဲ မွ Jon Snow သင္ခန္းစာမ်ား
Categorized as Knowledge, Movie
ငြိမ်းချမ်းညီညွတ်တိုးတက်ရေးအတွက် အနုပညာရှင်အားလုံး ဝန်းရံပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေတ္တာရပ်ခံ
ပြည်သူများလိုလားတောင့်တနေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီညွတ်ရေးနှင့် တိုးတက်ရေးအတွက် ရုပ်ရှင်လောကသားများ အပါအဝင် စာပေ၊ ဂီတ၊ သုခုမအနုပညာရှင်များအားလုံးက ဝန်းရံပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံပါကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က၂၀၁၆ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲသို့ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် အနုပညာရှင်များအနေဖြင့် လက်ရှိကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၊ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု၊ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည် ဆောက်ရေးပန်းတိုင်များကို ပြည် သူများ လျှောက်လှမ်းရာတွင် များ စွာအထောက်အကူပေးနိုင်သည် ဟု ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဝဏ်လွှာကို သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်က ဖတ်ကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်သူများအကြားတွင် ခွဲ ခြားမှု၊ အမုန်းတရားများကင်းဝေး ပြီး မေတ္တာတရားများ တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်လာရန် အပတ်တကုတ် ကြိုးစားလိုစိတ်များ တိုးပွားလာ စေရန်၊ စာရိတ္တနှင့်… Continue reading ငြိမ်းချမ်းညီညွတ်တိုးတက်ရေးအတွက် အနုပညာရှင်အားလုံး ဝန်းရံပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေတ္တာရပ်ခံ
Categorized as Entertainment, Movie, News Tagged entertainment, Myanmar, News
ပီလရမ် ဖရာနမ် လို့ အမည်ရတဲ့ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဟာ ၁၉ရာစု ကုန်းဘောင်မင်းဆက်တို့ရဲ့ အကြောင်းကို အသားပေးရိုက်ကူးထားပြီး ဘုရင်မင်းမြတ်တို့ရဲ့ သိက္ခာကို ကျဆင်းစေတယ်လို့ ထိုင်းသမိုင်းပညာရှင်တွေက ဝေဖန်နေကြတဲ့ အပြင် အဆိုပါ ဇာတ်လမ်းကို မလွှင့်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ပီလရမ် ဖရာနမ် ဆိုတာ မီးတောက်မီးလျံနဲ့တူတဲ့ မိန်းမ လို့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပြီး ကုန်းဘောင်မင်းဆက်တို့ရဲ့ နန်းတွင်း အရေးတွေကို ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဇာတ်လမ်းတွင် အာနန်သစ် အမည်ရှိ အမျိုးသမီး ဇာတ်ကောင်ဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော်လည်း အဝတ်အစားနှင့် အဝတ်အစားများမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ် နန်းတွင်းအဝတ်အစားများ ဖြစ်နေတာကြောင့် ကုန်းဘောင်မင်းတို့ရဲ့ နာမည်အတိအကျ မပါစေကာမူ အဖြစ်အပျက်များမှာ အားလုံးတူတူပင်ဖြစ်သည်။ နာမည်များသာ လွှဲ၍ အသုံးပြုထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ကျရှုံးရခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သော ကုန်းဘောင်မင်းတို့ရဲ့… Continue reading ၁၉ရာစု ကုန်းဘောင်မင်းတို့ရဲ့ သိက္ခာကို ကျဆင်းစေတဲ့ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲ မလွှင့်ဖို့ တောင်းဆို
Categorized as Entertainment, Movie, News Tagged movie, Myanmar, thailand
အော်စကာဆု မှားယွင်းပြီး ကြေငြာ၊ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု မှာ La La Land မဟုတ်ဘဲ Moonlight ဇာတ်ကားဖြစ်နေ
ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ Presenter ရဲ့အမှားကြောင့် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား ဆုကို မှားယွင်းပြီး ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုကို La La Land လို့ကြေငြာခဲ့ပေမယ့် တစ်ကယ့် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုကတော့ Moonlight ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ La La Land ဇာတ်ကားဟာ အကောင်းဆုံး ဆုဖြစ်ပါတယ်လို့ ကြေငြာချက်အပြီးမှာ La La Land အဖွဲ့သားတွေဟာ အောင်ပွဲခံနေကြပြီး ထိုအချိန်မှာ ကြေငြာချက်ဟာ မှားယွင်းသွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်တာကြောင့် တစ်ကယ့်ကို အောင့်သီးအောင့်သက်နိုင်စေမှာ အမှန်ပါဘဲ။ La La Land ဟာ အော်စကာဆု ၇ဆု လို့ ကြေငြာခဲ့ပေမယ့် အကောင်းဆုံဇာတ်ကားဆုက Moonlight ဇတ်ကား ဖြစ်တယ်လို့… Continue reading အော်စကာဆု မှားယွင်းပြီး ကြေငြာ၊ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု မှာ La La Land မဟုတ်ဘဲ Moonlight ဇာတ်ကားဖြစ်နေ
Categorized as Entertainment, Movie, News Tagged entertainment, oscar
La La Land ဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာ ဆုရသွားတဲ့ ဒမ်မီရန်ချက်ဇယ်လ်
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၈၉ ကြိမ်မြောက် အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ La La Land ဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုကို ဒမ်မီရန်ချက်ဇယ်လ် ကရရှိသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်တယ်။ ဒါ့အပြင် ဒမ်မီရန်ချက်ဇယ်လ် ဟာ အသက် ၃၂ နှစ်ရှိပြီး အော်စကာ ဆုပေးပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ အသက်အငယ်ဆုံး ဆုရှင်တစ်ဦး အဖြစ်လည်း သမိုင်းဝင်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ La La Land ဇာတ်ကားဟာ အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံဆု၊ အကောင်းဆုံး နောက်ခံတေးဂီတဆု၊ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ဝင်တေးဆု၊ အကောင်းဆုံး ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်း နဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာ ဆုအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့ပြီး ဂီတဇာတ်လမ်း ကိုအခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆုပေးပွဲသမိုင်းမှာ ဆုအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Categorized as Entertainment, Movie, News Tagged entertainment, movie, News
Beauty and the Beast (2017) ရုပ်ရှင်အကြိုခံစားကြည့်ခြင်း
ကဲ… သူငယ်ချင်းတို့ အရင်ကကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ Beauty and the Beast ကာတွန်းဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသာထားဦးတော့၊ လာမဲ့ 2017မှာ Disneyကနေထွက်ရှိမဲ့ Beauy and the Beast 2017 filmလေး အကြောင်း မိတ်ပေးပါရစေလားဗျာ… ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ ၁၉၉၁ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Disneyရဲ့Beauty And the Beast Animation ကာတွန်းကိုပြန်လည် အသက်ဝင်လာအောင် အခြေခံရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Bill Condonရဲ့ ညွန်းကြားမှုနဲ့အတူ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Emma Watson၊ Dan Stevens၊ Luke Evans၊ Kevin Kline၊ Josh Gad၊ Ewan Mcgregor၊ Stanley Tucci၊ Audra McDonald၊ Gugu Mbatha-Raw၊ Mc… Continue reading Beauty and the Beast (2017) ရုပ်ရှင်အကြိုခံစားကြည့်ခြင်း
Categorized as Entertainment, Movie Tagged movie
ရုပ်ရှင်အမျိုးအစား : Manga, Mystery, Psychological, Supernatural ဘာသာစကား : ဂျပန် ထွက်ရှိသည့်နေ့ : ၂၉၊၁၀၊၂၀၁၆ ၂၀၀၆ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၇ရက်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Death Note Filmကို လူတော်တော်များများက ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ၂၀၀၆ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ Death Note:The Last Name ကိုလည်းဆက်လက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။အယ်လ်နဲ့ကီရာတို့ရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုကြီးဟာ Death Note:The Last Nameမှာ အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ 2008ခုနှစ်မှာ Death Noteနဲ့မသက်ဆိုင်တော့တဲ့ Change The World Filmလေးကိုထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အယ်လ်ရဲ့စွန့်စားမှုတွေကပ်ရောဂါအရှုပ်တော်ပုံတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရမှာပါ။အယ်လ်ဟာ 2008ခုနှစ် Filmမှာ သူ့နာမည်ကို သေမင်းစာအုပ်မှာရေးသွင်းခဲ့တာကြောင့်အခုဇာတ်လမ်းမှာတော့ မပါဝင်တော့ပါဘူး။ Death Noteနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Filmအသစ်လေးကတော့ ၂၉ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ခုနှစ် ကထွက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ကီရာနှင့်အယ်လ်တို့၏ ရန်စများပြီးဆုံးပြီးကာလနောက်ပိုင်းဆယ်နှစ်ကြာပြီးသောအခါ ရှီမီဂါမီသေမင်းဟာ ကမ္ဘာ့ရှုပ်ထွေးမှုကြီးထပ်ဖြစ်လာအောင်… Continue reading Death Note: Light Up The New World (2016)
Categorized as Entertainment, Movie Tagged death note, movie